Thwebula Hetman Partition Recovery 3 Standard... – Vessoft
WindowsUhleloIsipele nokubuyiselaHetman Partition Recovery
Ikhasi elisemthethweni: Hetman Partition Recovery
I-Wikipedia: Hetman Partition Recovery
Hetman Hlukanisa Sokubuyisa – a software ukuze alulame idatha abalahlekileko ususiwe. Isofthiwe kuqinisekisa ukubuyisela amafayela emva ukufomatha noma ukulimala drive kanzima, ukuhlanzwa of ubhasikidi, crash uhlelo njll Hetman Hlukanisa Lokubuyisela isekela izindlela multiple of analysis of the system for the phambi idatha kusulwe futhi kwenza ukubuka okuqukethwe amafayela ngaphambi ukubuyiselwa. Ekupheleni alulame isofthiwe kwenza ukusindisa amafayela on the hard drive, ulayishe idatha ku-server akude noma ukudala ISO yabo image. Hetman Hlukanisa Sokubuyisa kuqinisekisa indlela elula kunazo ukubuyisela amafayela ngokusebenzisa master ngeengaba.
Alulame idatha suswa akwazi kabana
Buyisela amafayela ezahlukene yezinkampani idatha and izingxenye system
Search Advanced kwemininingwane ususiwe
Buka okuqukethwe amafayela ngaphambi zokubuyiselwa
Save the idatha zibuyiswe ngo ngetakhiwo letehlukene
Thwebula Hetman Partition Recovery
Amazwana ku Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery software ehlobene
Isofthiwe sokusukuma umsebenzi amasevisi ezibalulekile futhi system nemingcele. Isofthiwe elungisa amaphutha ebhukwini kanye abonakele uhlelo amafayela.
Advanced System Tweaker – isoftware ukwenza ngcono ukusebenza kwekhompyutha yakho. Isoftware iqukethe uhla lwamathuluzi ukusheshisa nokwandisa uhlelo.
Line – ithuluzi lokuxhumana phakathi kwabasebenzisi emhlabeni wonke. Isoftware ikuvumela ukuthi wenze amakholi wezwi, amakholi wevidiyo, nemiyalezo yokushintshanisa.